सेतो मछिन्द्रनाथलाई नुहाइयो (तस्बिरहरु)
काठमाडौँ– सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्तिको स्नान सम्पन्न भएको छ। सोमबार काठमाडौँको इन्द्रचोक जनबहालमा मूर्तिको स्नान गरिएको हो। हरेक वर्ष पौष शुक्ल अष्टमीमा सेतो मछिन्द्रनाथको स्थान गर्ने प्रचलन रहेको छ। सेतो मछिन्द्रनाथलाई वर्षा र सहकालका देवता मानिन्छ। सेतो मछिन्द्रनाथको रथलाई नगर परिक्रमा गराउनेसमेत चलन रहिआएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीदेखि सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु हुन्छ। […]
कतिपय मानिसको शरीरमा सेतो दाग देखा पर्दछ । यस प्रकारको सेतो दागलाई मेडिकल भाषामा विटिलिगो वा ल्यूकोडर्मा भनिन्छ । यो साधारण रोग हो । यो रोग धेरैजसो कालो छाला भएका मानिसलाई हुन्छ । यो रोग लागेका धेरैजसो व्यक्तिको मुख, गर्धन पछाडि, नाडी र खुट्टामा सेतो दाग हुने गर्दछ । किन हुन्छ सेतो दाग ? – […]
पोखरामा फेरि देखियो सेतो पुतलीको संक्रमण
पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतली (सापु) को संक्रमण देखापरेको छ ।विगत दुई सातादेखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखापरेको हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. इन्द्र महर्जनले बताए । दुई सातामा सेतो पुतलीको संक्रमणबाट अस्पतालमा करिब २० जना आँखाका बिरामी आएको उनले जनाए । प्रायः गरी भदौ र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुसका […]
जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ ।्घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो रतुवा मृगलाई सबडिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाएको हो । सदर चिडियाखानाका भेटनिरियन डा. पर्वतजंग थापाले सेतो रतुवामृग चिडियाखानाले जिम्मा लिएको बताए । अभिभावक गुमाएको अवस्थामा भेटिएको सेतो रतुवा […]
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सकियो
काठमाडौं। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरी सम्पन्न गरिएको छ।पहिलो दिन रथलाई असन र दोस्रो दिन हनुमानढोका लगी राखिएको थियो। जात्राको तेस्रो दिन हनुमानढोकाबाट रथ तानी लगनटोल पुर्‍याएपछि तेस्रो दिन सेतो मच्छेन्द्रनाथको आमाको मन्दिर र चौथो दिन सेतो मच्छेन्द्रनाथलाई जनबहालमा फर्काइएको छ। आज (पाँचौं दिन) मन्दिरमा स्थापना पश्चात जात्रा समापन हुन्छ।
सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ हनुमानढोकामा
काठमाडौं । वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा असनबाट हनुमानढोका पुर्याइएको छ । प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबारमार्गस्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा शुरु हुन्छ । पहिलो दिन रथ असनमा लगी राखिएको थियो । जात्राको दोस्रो दिन आज असनबाट रथ तानेर हनुमानढोकास्थित कालभैरवको मूर्तिअघि लगी राखिएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । बिहीबार रथ हनुमानढोकाबाट लगनटोल पुर्याइन्छ । लगनमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ तीनपटक घुमाउने गरिन्छ । शहरको भित्री भ
असन पुगेर राष्ट्रपतिद्वारा सेतो मछिन्द्रनाथको दर्शन
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असन पुगेर सेतो मछिन्द्रनाथको दर्शन गरेकी छिन्। आज दिँउसो केलटोलबाट खटमा राखेर तीनधारा पुर्‍याइएको सेतो मछिन्द्रनाथलाई रथयात्रा गर्दै साँझ असन पुर्‍याइएको थियो। असनको अन्नपूर्ण मन्दिर अघि रथ पुर्‍याइएको रात राष्ट्रप्रमुख सेतो मछिन्द्रनाथको दर्शन गर्न पुग्ने परम्परा रहेको छ। भण्डारीले अन्नपूर्ण मन्दिर र सेतो मछिन्द्रनाथको रथ…
तीनधाराबाट यसरी असन पुर्‍याइयो सेतो मछिन्द्रनाथलाई
काठमाडौं : वर्षा र सहकालका देवता जनबहा: द्य: (सेतो मच्छिन्द्रनाथ)को रथयात्रा सुरु भएको छ। केलटोल (जनबहा:) बाट सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई विधिपूर्वक पूजाआजा गरी खटमा राखेर विभिन्न बाजागाजाका साथ तीनधारा पाठशालामा पुर्‍याइएको थियो। तीनधारामा सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई खटबाट निकालेर त्यहाँ बनाइएको रथमा राखी रथयात्रा गरिएको हो। रथलाई तानेर घण्टाघरबाट रत्नपार्क, भोटाहिटी हुँदै सेतो मछिन्द्रनाथलाई असन पुर्‍याइएको…
काठमाडौं महानगरपालिका-३५ जनबहालस्थित सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा प्रवलीकरणको कार्य सुरु भएको छ
सेतो मछिन्द्रनाथको स्नान (फोटो फिचर)
८ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंमा बिहीबार सेतो मछिन्द्रनाथको स्नान गरिएको छ । काठमाडौंको केलटोलस्थित जन बहाः भनिने कनकचैत्य महाविहारमा सेतो मछिन्द्रनाथ को स्नान विधिपूर्वक सम्पन्न गरिएको छ । हेर्नुहोस् तस्वीरहरु